दरबारमार्गमा भिषण आगलागी ! आगो नियन्त्रणमा कठिनाई (भिडियो सहित) || Nepali Online News Portal From Temal
दरबारमार्गमा भिषण आगलागी ! आगो नियन्त्रणमा कठिनाई (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिती: आइतवार, अशोज २६, २०७६
काठमाडौ – दरबार मार्गमा साझ करिब ६ बजे करेन्ट सर्ट भइ भिषण आगलागी भएको छ। दरबारमार्ग स्थित विक्ट्री लाउन्जबाट आगलागी सुरु भएको हो।
बिजुलीको नाङ्गो तारको कारण करेन्ट सर्ट भइ आगलागी भएको हो। आगो नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना, शस्त्र प्रहरी बल र नेपाल पुलिस लगायतको टोलीहरु खटिएका छन्। विक्ट्री लाउन्ज जलेर नष्ट भइ सकेको छ। उक्त विल्डिङको सेकुरेटी गार्डले समयमै करेन्ट सर्ट भएको थाहा हुँदा मानवीय क्षेती भने भएको छैन।
एकै विल्डिङको चौथो तलामा रहेको बान्थाई रेष्टुरेन्ट पनि जलेर नष्ट भएको छ।
हाल सम्म पनि आगो नियन्त्रण हुन सकेको छैन।आगो नियन्त्रण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। आगो नियन्त्रण गर्ने क्रममा एक जना सामान्य घाइते भएको छ।यस आगलागीले करोडौंको क्षेती गरेको छ। यसका साथै आसपास रहेको एन्टा ब्रान्डको सोरुम केटिएम सिटीमा पनि आगो लागेको छ।
काभ्रेमा टिपर र बोलेरोले मोटरसाइकल च्यापिँदा एक जनाको मृत्यु , एक जना गम्भीर घाइते